Dadka Soomaaliyeed ee dibedda ku nool waxay kalin muuqata kaga jiraan hurinta
Wararsiga waxaa qaaday:
Nuuradiin Macallin Muqtaar (Diinoow)
Waxaa noo suurtagashay in aan wareysi qadka isgaarsiinta ah la yeelano Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda ahna Wakiilka Golaha Wadatashiga Soomaaliyeed C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban" oo hadda ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska wareysigii aan la yeelanayna wuxuu u dhacay sidatan:-
Su'aal:- Maxaa sababa inta badan dagaalada mar kasta ka dhaca meelaha ay degaan taageerayaasha ururka USC/SSA?
Jawaab:- Dabcan mar haddii uu meesha ka baxay amarkii iyo kala dambeytii aad ayay u fududahay dagaallo aan tala galin in ay si fudud isaga dhacaan, dagaaladanina waxay qeyb ka yihiin kuwa ka soconaya guud ahaan koofurta Soomaaliya.
Su'aal:- Maxay salka ku hayaan dagaaladan ka dhacaya maalmihii ugu dambeeyay Waqooyiga magaalada Muqdisho?
Jawaab:- Waxay salka ku hayaan dagaaladan soconaya garasho la'aan iyo aqoondarro bulshada dhexdeeda ah, iyadoo inta la og yahay dagaalaga ahliga ah ee ka socda dalkeena Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay ay yihiin kuwo lagu burburiyay heykalkii qarannimo iyo hey'adihii loogu adeegi jiray shacbiga Soomaaliyeed, sidaas darteed dagaalada hadda socdaa wax badan kuma soo kordhinayaan hanaanka dib u heshiisiinta ee hadda socda, runtii waan ka xunnahay sii socoshada dagaalada sokeeye.
Su'aal:- Sameyn intee la'eg ayay ku yeelan karaan beesha Mudullood dagaalada faraha badan ee dhexmara darteed mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya?
Jawaab:- Dagaalada socaya waxay dadka Soomaaliyeed gabi ahaan kala galiyeen tafaraaruq iyo kala fogaanshiyo dhex marta, waxayna mugdi galiyeen qaranimadii Soomaaliyeed, hadaba iima muuqaneyso in beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed kalligeed ay tahay in wax la iska weydiiyo lana sheego doorka ay ku yeelan karaan mustaqbalka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya.
Su'aal:- Kaalin intee la'eg ayay ku leeyihiin dadka dibedda ku nool dagaallada iyo mushaakilka Soomaaliya?
Jawaab:- Dhinac la tilmaami karo ma jiro oo aan qeyb ka noqon shidada ka soconeysa Soomaaliya, qeybaha ka nabad galay dhibaatada Soomaaliya gaar ahaan kuwa dibedda ku nool waxay kaalin muuqata kaga jiraan burburka iyo dagaalada ka dhaca Soomaaliya, waana maskaxda maalgalisa siina hurisa dagaalada sokeeye.
Su'aal:- Yaa hadda Guddoomiye u ah Golaha wadatashiga Soomaaliyeed?
Jawaab:- Guddoomiyaha Golahan waa Dr. Hussein H. Moh'ed Bood
Su'aal:- Yaad is leedahay waa mudan yahay in uu Soomaaliya ka noqdo madaxweyne shirka dib u heshiisiinta ee ka socda Nairobi musharaxiinta isu soo taagtay?
Jawaab:- Qofka madaxdweyne ka noqonaya Soomaaliya waxay ila tahay in go'aankeeda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed, Anigase iima muuqaneyso in qofka noqonayaa madaxweyne lagu soo xulo heybta uu ka soo jeedo, balse waxaan qabaa in qofka lagu qadariyo waxqabadkiisa iyo waxa uu doonayo doonayo in uu gaarsiiyo dadkiisa Soomaaliyeed si loo gaaro badbaado qaran.
Su'aal:- Shirka mudada dheer ka socda magaalada Nairobi rajo intee la eg ayaad ka qabtaan?
Jawaab:- Rajada aan ka qabno waa in uu noqdo mid guuleysta, horseedna u noqda heshiis dhab ah oo dhex mara kooxaha nabadgalyada u diiday dadka iyo dalka Soomaaliya.
Su'aal:- Ugu dambeyntii maxaad ugu baaqeysaa dadka Soomaaliyeed iyo kooxaha ku dagaalamaya magaalada Muqdisho?
Jawaab:- Marka waxaan shacbiga Soomaaliyeed xusuusineynaa qiimaha ay leedahay nabadda iyo in khilaaf kasta oo soo kala dhexgala lagu xalliyo wada hadal iyadoo xisaabta lagu darayo in aan mar dambe si sahal ah lagu daadin dhiiga dadka walaalaha ah intaas ka dib, waxaan dhamaan kooxaha uu ka dhaxeeyo dagaalka ka codsaneynaa in ay u joojiyaan si shuruud la'aan ah, waxaan xusuusineynaa in burbur iyo barac hor leh ma ahee aan wax kale lagu gaareyn dagaalkan.
NABAD, MIDNIMO, HORUMAR IYO CADDAALAD
Wariye Nuuradiin Macallin Muqtaar (Diinoow)